Mpanamboatra sy mpamatsy azo sintomina Badge - China Factory Retractable Reels Factory
Metal Metal Retractable Badge Clip Key Holder Round Antique Matte Surface
Product Description Classical Metal Retractable Badge Clip Holder Key Key Round Antique Matte Surface Famaritana: Model model: metal badge reel Material: metal (metaly zinc) + plastika Size: 35 * 9mm Color: volamena, volafotsy Bika: boribory misy tariby tariby: mihoatra ny 55cm lava pirinty Logo: expoxy, laser, lamba lamba landy Fitaovana: fehin-kibo PVC, farango vy, peratra fisarahana Lanja: 32.1G Fampiharana: lesuire / isan'andro, mitazona lakile, karapanondro, jiro sns sns fampiasana: fampiroboroboana, dokam-barotra, fampirantiana ...
Semimetallic Round Retractable Badge Reel Miaraka amin'ny Ritatoran'ny fiarovana ID Safe Split
Famaritana momba ny vokatra maharitra ID Badge Reel 4CM boribory endrika tariby rehetra manitatra tariby miaraka amina kodiarana fanalahidy peratra tombo-kase tonga amin'ny karazana loko sy fomba mifanaraka amin'ny fampiasana samy hafa. Ny kodiarana dia voaomana amin'ny fantsom-pirinty fehikibo vy any aoriana mba hampiasaina mora foana. Azonao atao ny manamboatra ny tadin'ny badgeo amin'ny loko tokana amin'ny safidy fanontana marobe sy dôma. Ireo horonan-tsoratry ny badge ireo dia mahatonga ny vahaolana mpihazona badge tonga lafatra ho an'ny birao, sekoly, toeram-panatanjahantena, fampiasan'ny hopitaly ary maro hafa. ...
Boribory Badge Reel boribory miaraka amin'ny peratra fisarahana ID Safety Retractor 4cm Diameter
Famaritana momba ny vokatra Boribory lela azo alaina boribory miaraka amin'ny peratra fisarahana ID fiarovana azo antoka 4cm Diameter famaritana: Anaran-modely: vy fehikibo metaly Fitaovana: metaly rehetra Loko: volafotsy habe: savaivony 40mm endrika: boribory Logo pirinty: logo laser fanao amin'ny halavan'ny tariby: 70-90cm Accessory: fehikibo fehikibo, peratra misaraka Retractable Badge Reel miaraka amin'ny Claw Clasp sy Clip ho an'ireo mpihazona karatra ID: Tady azo esorina: ny mpihazona ny badge azo esorina dia miaraka amin'ny tadin'ny polyester azo esorina izay mipaka amin'ny 26.5inch / 65cm lon ...
Metal Round Retractable Badge Reel, Heavy Didy Retracting Id Card Reels
Product Description Metal Round Retractable Badge Reel, Heavy Duty Retracting Id Card Reels Safidy malaza sy ara-toekarena amin'ny hetsika rehetra, ity mpihazona badge retractable boribory ity dia tonga amina karazana loko sy fomba mifanaraka amin'ny fampiasana samy hafa! Izy io dia misy fametahana fehikibo vita amin'ny fehikibo vy ao aoriana mba hampiasaina mora foana. Azonao atao ny manamboatra ny tadin'ny badgeanao amin'ny loko tokana amin'ny fanontana dôma maro loko sy fiarovana. Miaraka amin'ny kofehy 24 ″ lava, ity valihaara badge ity dia misy clea maharitra ...
Carabiner Badge Holder Reel Clip azo esorina amin'ny endrika oval miaraka amin'ny fanontana Logo manokana
Famaritana ny vokatra Carabiner Badge Holder Reel Clip azo esorina amin'ny endrika oval miaraka amina fanontana logo manokana. Azonao atao ny manamboatra ny tadin'ny badgeo amin'ny loko tokana amin'ny safidy fanontana marobe sy dôma. Famaritana: Anaran'ny modely: carabiner badge reel Fitaovana: plastika ABS, metaly habe: 31 * 38mm Halavan'ny tariby: 60cm Loko: matevina na mangarahara namboarina Averina: fehikibo fantsona na tsy misy Accessory ...
Universal Badetr Reel Badge Reel Oval Atody endrika manitatra Reel Holder Key
Famaritana ny vokatra Universal Retractable Badge Reel Oval Egg Shape Manitatra Key Holder Reel Badge Reel dia plastika na sintona. Izy io dia namboarina niaraka tamin'ny clip-on any aoriana ary niaraka tamin'ny fehikibo PVC na kojakoja tsy voatery. Izy io dia afaka mitazona karatra fiasana, karatra anarana, telefaona finday ary lakile. Ireo horonan-tsoratry ny badge ireo dia mahatonga ny vahaolana mpihazona badge tonga lafatra ho an'ny birao, sekoly, toeram-panatanjahantena, fampiasan'ny hopitaly ary maro hafa. Famaritana: Anaran'ny modely: carabiner badge reel Fitaovana: ABS, firaka zinc loko: ...
Badge Reel ID Badge azo alaina miaraka amina peratra sy peratra misaraka
Famaritana momba ny vokatra azo alaina misintona Badge Reel ID Badge Miaraka amin'ny Ratra Miaraka Amina Fehin-kibo Ary misoritra ity kodiarana badge carabiner miloko mazava miaraka amin'ny tady mazava misy loko manintona sy mamirapiratra izay mampiseho ny fiasa anaty ny roul. Ny carabiner dia mametaka mora foana amin'ny fehikibo amin'ny fomba azo antoka sy mora ampiasaina. Safidy lehibe io Badge Reel io rehefa mila ny badge akaikinao ianao, saingy tsy takiana ny fahitana azy eo amin'ny haavon'ny masonao, ny rakitsary na ny carabiner mihantona ao am-paosinao, fehikibo loo ...
Transparent Retractable Reel Badge Holder Miaraka amin'ny Vinyl Strap Safety Promotional Retractor
Product Description Transparent Retractable Reel Badge Holder With Vinyl Strap Security Promotional Retractor famaritana: Model model: carabiner badge rod Material: plastika ABS, metaly Size: 31 * 38mm nylon cord: 65-68cm ny halavany Color: misy Panton loko Averina: fehikibo clip na tsy misy Fitaovana: vinyl strap Logo: dome epoxy, lamba lamba landy Fampiasana: fanomezana azo ampitaina, ho an'ny tompon'ny marika Badge: Fomba maharitra, mahazaka karatra marobe avo lenta avo lenta sy antoky ny fandefasana haingana Azo alaina ...
Plastika azo alaina Id Badge Reel Holder Oval endrika miaraka amin'ny PVC Strap Solid Colours
Famaritana ny vokatra plastika azo alaina mihady lova mihazona endrika boribory lavalava miaraka amina fehikibo fantsom-pifandraisana vita amin'ny kofehin-kibo ID, ity yoyo miaraka amina endrika lavalava ity dia miaraka amina endrika kanto sy kanto. Azo ampiasaina hitazonana kara-panondro, Pass pass, karatra maha-mpikambana azy mora foana. Izy io dia nanamafy ny tadin'ny vinyl (Nylon) sy ny fastener vy ho an'ny faharetana sy ny fiarovana. Izy io dia vokatra mety ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny mpianatra sy ny mpiasa, sns. Ity endriny chrome tsara sy be dia be ity dia ...
Aluminium Heavy Duty Badge Reels Alligator Clip Miaraka amin'ny Cigarette Lightner Holder
Famaritana ny vokatra Aluminium Heavy Duty Badge Reels Alligator Clip Miaraka amin'ny sigara mpanazava sigara mpihazona ny hazondamosina dia misy loko sy fomba mifanaraka amin'ny fampiasana samihafa. Ny kodiarana dia voaomana amin'ny fantsom-pirinty fehikibo vy any aoriana mba hampiasaina mora foana. Azonao atao ny manamboatra ny tadin'ny badgeo amin'ny loko tokana amin'ny safidy fanontana marobe sy dôma. Ireo roulam-panamarihana ireo dia mahatonga ny vahaolana mpihazona badge tonga lafatra ho an'ny birao, sekoly, toeram-panatanjahantena, fampiasan'ny hopitaly ary maro hafa! Des ...
Tendrontany plastika boribory mavesatra miaraka amina mpanazava maivana ary vonona ho amin'ny lafiny ara-tontolo iainana
Famaritana ny vokatra plastika boribory boribory mavesatra miaraka amina mpamadika maivana ary vonona ho an'ny namana: famaritana maodely azo alefa: fitaovana plastika ABS, firaka zinc, habe vita amin'ny vy: 32x10mm fitoeran-jiro: pvc, 57 * 21mm, 57 * 26mm tady: mainty nylon, ny halavany 60cm Logo: dôso expoxy, pirinty fanaovana pirinty vita amin'ny landy: fehikibo fehikibo, peratra vy telozoro, mpitazona maivana kokoa fampiasana: mitazona mpihazona maivana kokoa amin'ny doka, zavatra atao, sns Fampiharana: birao, fampirantiana, c ...
Badge Retractable Badge Reel azo zakaina sigara azo esorina ny sigara
Product Description Heavy Duty Retractable Badge Reel Retractable Cigarette Lighter Holder Ity style ity dia mipetaka amin'ny fehikibo, paosy, zipo na kitapom-batsy ary manome ny mpampiasa azy hiditra haingana amin'ny jiro, clip amin'ny fehikibo maivana ary aza very na mitady ny anao intsony. Famaritana: Anaran'ny modely: mpitazona maivana azo averina azo ampiasaina Material: plastika ABS, firaka zinc, metaly habe: 35mm na Logo namboarina: pirinty efijery, epoxy dome Ny halavan'ny tadin'nylon: mahazatra 0.6 * 60cm, 70/75/80 / 90cm availa ...